Ukuqhuba iiMalware ngokuzenzekelayo kwi-Windows 7 eneWindows Defender
KwiWindows 7, esinye sezixhobo ezifanelekileyo zokuphepha kunye nokususa ispyware kunye neentsholongwane kwiPC yakho yiWindows Defender. Nangona kunjalo, iMicrosoft yenza inkqubo yeWindows Defender kunzima ukuyifumana kwiWindows 7.
Ukuba ikhompyuter yakho yosulelwe yingxubevange efana ne-spyware kunye neentsholongwane, uya kuthi ungene kwiingxaki ezisusela kwi-glitches kwinkqubo yakho kwaye ucothise ukusebenza kwesantya sokungena ngasese, ukutshintsha iphepha lasekhaya, kunye nokufikelela kwikhompyuter yakho ukuze usebenzise ukuhlasela enye.
Inkqubo yeWindows Defender iyakwazi ukuyeka uninzi lwe-spyware ekuzifakeleni ngokuzenzekelayo kwaye isuse ispyware esele singene kwi-PC yakho. Eyona nto ilungileyo okwangoku, uHlaziyo lweWindows kwiWindows ligcina iWindows Defender ikwindawo entsha ngokuzenzekelayo ukuze iqaphele kwaye itshabalalise iintlobo zamva nje zespyware.
Cofa kwimenyu yokuQala, chwethezaWindows Defenderkwibhokisi yokukhangela, kwaye ucofe igama layo kuluhlu.
Ngelishwa, ukuchwetheza igama layo kwibhokisi yoKhangelo yeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana inkqubo yeWindows Defender kuba ayisaphili kwimenyu yokuQala, njengoko yenzayo kwiWindows Vista. Kwaye ayidweliswanga phantsi kwalo naluphi na udidi kwiPaneli yokuLawula.
Cofa indawo yokuskena yeWindows Defender kwimenyu ephezulu.
Isikhuseli seWindows ngokukhawuleza senza ukuskena ngokukhawuleza kwiPC yakho. Xa kugqityiwe, yiya kwiNyathelo 3.
Cofa izixhobo, khetha uKhetho, kwaye ukhethe uChwetheze ngokuzenzekelayo ikhompyuter yam (kucetyisiwe) ibhokisi yokukhangela, emva koko ucofe ku Gcina.
Ezi shedyuli zizicwangcisela ngokuzenzekelayo ukuqhuba ngo-2 kusasa yonke imihla, indlela elula yokunceda ukugcina iPC yakho ikhuselekile.
Zive ukhululekile ukuqhuba ngaphezulu kwesinye iskena se-spyware kwi-PC yakho. Ngokungafaniyo neenkqubo ze-antivirus, iinkqubo ze-antispyware ziyahambelana. Ngamnye wenza iskena sakhe, abulale nayiphi na ispyware ayifumeneyo.
I-Doxepin (iifomsile, ukugxila komlomo)
Imemori engakumbi yeMacBook yakho
Ipolibar Plus, uLwelo
I-Sociology yeeDummies Cheat Sheet
Ukuguqula iFayile yakho yeDijithali yemifanekiso eqingqiweyo ukuze uyisebenzise kwikhompyuter yakho
I-Alavert ye-D-12 yeYure yokuNwa komzimba kunye neSinus
INKQUBO YOKUQALA ENGAPHAMBILI KWIEKAT & Kittens
Indlela yokubilisa amanzi
Iingqungquthela (Herpes Zoster)
Indlela yokufikelela kwiimpawu ezikhethekileyo kwifowuni yakho ye-Android
Iibhola ze-Banjo: Indlela yeFinger G, D7, kunye noC
Ukulinganisa i-ionic equations calculator
isisu esibuhlungu xa usexesheni
Umahluko phakathi kwe-advil kunye ne-tylenol
indlela Connet Xbox siphile
iziphumo ebezingalindelekanga ze-carbamazepine